जीवनमा हरेस र चरेश खानु हुदैनः किरण अधिकारी
Monday, 26 Oct, 2015 3:08 PM
किरण अधिकारी नुवाकोटको तुप्चेमा जन्मेका हुन् । सानैदेखि गीतसंगीत भनेपछि हुरुक्क हुने उनको रहर बल्ल पुरा हुदै छ। दशैँ पछी उनको संगीतमा रोईला गीति एल्बम बजारमा आउदैछ । त्यसैको तयारीमा उनि अहिले व्यस्त छन । उनि हाल रास्ट्रीय लोक तथा दोहोरि गित प्रतिस्ठान बागमती अंचलको अध्यक्ष, एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपको निर्देशक ,वर्ल्ड एसोसियसन अफ प्रफमिंग आर्ट्सको नेपाल सेक्सनको उपाध्यक्ष,नेपाल सास्कृतिक संघ नुवाकोटको महाधिबेशन प्रतिनिधि ,नेपाल प्रेस युनियन नुवाकोटको अध्यक्ष लगायत धेरै संघ सस्थामा आबद्द छन् । प्रस्तुत छ उनै अधिकारीसंग गरिएको भालाकुसारीः
म अहिले पत्रकारितामा नै व्यस्त छु ,साथै दशैको अबसरमा जिल्लामा हुने कार्यक्रममा सहभागी भईरहेको छु । त्यसको अलावा मेरो र पुस्कर अर्यालको संयुक्त प्रस्तुति रहेको रोइला गीति एल्बम बजारमा ल्याउने तरखरमा छु ।
कहिले सम्म आउछ एल्बम ?
अब थोरै मात्र काम बाकि छ । रेकर्ड गर्ने कार्य सकिएको छ । जसमा स्वर कृस्न रेउले ,सम्झना लामिछाने मगर , शब्द कमला क्षेत्रि अनि लय मेरो आफ्नै रहेको छ । देशमा उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिले गर्दा ढिला हुन पुगेको हो दशैँ पछी बजारमा आउछ ।
गित कस्तो छ ?
गित समय सापेक्ष छ अनि देशको समय अनुसारको छ । रोईला गित हो अत्यन्त रमाइलो खालको छ ।
के देखेर लाग्नु भयो गायन यात्रामा ?
सबै को आ आफ्नो रुची हुन्छ त्यहि अनुसार मेरो पनि रुची थियो । तर रहर गरेर मात्र हुदो रहेनछ समय पनि आउन पर्ने रहेछ बल्ल आयो । फेरी पत्रकारिता पनि एक किसिमको कलाकारिता नै हो र यो पेसाले पनि सहयोग गर्यो अनि सानैदेखिको ईच्छा पुरा गर्न यो क्षेत्रमा लागेको हु ।
पत्रकारितामा अझै धेरै काम गर्ने अनि नया नया कलाकारको खोजि गर्ने नेपाली गीत संगीतमा नया गीत बजारमा ल्याउने एउटा सफल कलाकार बन्ने ।
लोक संगीतमा बिकृति आयो भन्छन् नि ?
आको नै हो मेरो बिचारमा पनि तर यसो हुनु राम्रो होइन नेपाली लोक गीत संगीत भनेको नेपाली समाज सापक्ष्य हुनुप र्छ । तर यसरी संगितमा विकृति अगाडी बढ्दै जाने हो भने लोकसंगीत भोलि गएर ईतिहासमा सिमित हुन्छ ।
बिकृति रोक्न के गर्न पर्ला ?
यो बिकृति रोक्न सबप्रथम त सष्ठा सर्जकले नै सोचेर गीतसंगीत बजारमा ल्याउन पर्छ । अनि यो कुरामा नेपाल सरकारले लोक संगीत बिकास बोर्ड स्थापना गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो एल्बमबाट कतिको आशाबादी हुनुहुन्छ ?
संगीत क्षेत्रमा लागेपछि यो मेरो नया र पहिलो एल्बम हो ,यसमा मेरा मित्र पुस्कर अर्यालले साथ दिनु भएको छ । गित अत्यन्त राम्रो भएको छ यो एल्बमबाट अत्यन्तै आशाबादी छु ।
धेरै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कसरि मिलाउनु हुन्छ समय ?
हेर्नुहोस काम गर्न इच्छा हुनुपर्छ समय मिलाउन सकिन्छ । काम गर्न जागर हुनुपर्छ समय भनेको मिल्छ ।
अलि फरक प्रसंगमा कुरा गरौ ,मोफसलमा काम गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ ?
मोफसलमा अत्यन्तै गार्हो छ किनकि सिमित स्रोत साधनको प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ साथै प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडी बढ्न गाह्रो छ ।
कत्तिको सजिलो हुन्छ त्यस्तो नया काम गर्दा ?
काम गर्दा कुनै पनि सजिलो हुदैन अनि हल्का पनि ,खट्नुपर्छ सफल होइन्छ अनि अर्को कुरा सबै काममा सफल होइन्छ भन्ने हैन असफल पनि भईन्छ तर हरेश खानु हुदैन ।